Social Media မှာသင့်လုပ်ငန်းစတင်ချင်တယ်ဆို ဒီအချက်တွေအရင်သိထားပါ -
E-commerce ကျယ်ပြန့်လာခြင်းနဲ့အတူ သင့်လုပ်ငန်းကို Social Media မှာစတင်လုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုစတင်ရမလဲ မသိသေးသူတွေအတွက် ဒီ Post လေးကအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁. ပထမဆုံး တစ်ချက်အနေနဲ့ စတင်ရမှာကတော့ သင့်ရဲ့ Targeted Audience တွေကို Research ပြုလုပ်ရပါ မယ်။ Research သေချာပြုလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်အကြောင်းအရာက Audience နှစ်သက်မလဲ? ဘယ်လို Topic မျိုးကို စိတ်ဝင်စားလဲ? ဆိုတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂. နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ကတော့ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ Audience တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ Network နဲ့ Platform ကို သေချာရွေးချယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၃. သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ရလဒ်တွေကို သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ KPI ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ KPI (Key Performance Indicator) ကတော့ မိမိလုပ်ငန်းမှာရရှိ ထားတဲ့ ရလဒ်တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင် မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄.Social Media ပေါ်မှာသင့်လုပ်ငန်းအတွက် Social Media Post တွေတင်ဖို့ အတွက် Content တွေဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Content တွေဖန်တီးရာမှာ လွယ်ကူစေရန်အတွက် Topic တွေ Headline တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Link တွေကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၅.နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Customer တွေဆီက Question & Answer တွေကို ဖြေကြားပေးနိုင်မယ့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လောက်ခန့်ထားဖို့ လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ Chat-bot ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Question & Answer တွေကို Ignore လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်း အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၆.သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ Digital Marketing Agency သို့မဟုတ် Digital Marketing Consultant တွေနဲ့သင့်လုပ်ငန်းကိုအပ်နှံခြင်းကလည်း အချိန်ကုန်သက်သာပြီးထိရောက်မြန်ဆန်စေပါတယ်။
လက်ရှိ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေကတော့ Social Media Marketing နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုသူတွေအနေနဲ့ သိရှိထားသင့်တဲ့ Tip တွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
Posted by Min Thuta/ ဩဂုတ် 6, 2020/ Blog/0Comment
Stay Home ရင်း Photo တွေ Edit လုပ်တာလေ့ကျင့်မယ်
Facebook Post တွေကိုဘယ်လိုတင်သင့်လဲ?
Facebook နဲ့ Instagram ဘာတွေကွာသွားလဲ ?
Design နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ Canva
Social Media မှာကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် နားလည်ထားရမဲ့အချက်များ ?